Gudd. Baarlamaanka oo afur u sameeyey qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaankii 8aad iyo 9aad… – Hagaag.com
Gudd. Baarlamaanka oo afur u sameeyey qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaankii 8aad iyo 9aad…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa afur u sameeyay qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaankii 8-aad iyo 9-aad.
Ujeedka kulanka ayaa ahaa mid uu guddoomiyaha kaga mahadcelinaayay xildhibaanada howlihii wanaagsanaa oo ay dalka ka soo qabtay iyo in ey hada wada shaqeyn dhexmarto.
”Waad mahadsan tihiin soo dhawaada, sharaf weyn ayay ii tahay caawa inan isla afurno waqti badana isla qaadano, xaqiiqdii dalkan howlo muhiim ah ayaa ka soo qabateen, waqti adagna wa ku soo shaqeyseen waana idinkaga mahadcelinayaa doorkii aad ka soo qaadateen dib u yegleelida Baarlamaanka.” ayuu yiri Maxamed Mursal.